Silamo - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fivavahana silamo)
Ny silamo na finoana silamo (amin' ny teny arabo: الإسلام / AlʾIslām) dia finoana abrahamika mifototra amin' ny finoana an' Andriamanitra tokana farany izay tokana ary amin' ny Kor'any izay heverin' ny mpino silamo fa boky nandraiketana ny tenin' Andriamanitra (Allah) ara-bakiteny natao sora-tononina. Ny Kor'any dia nambara tamin' i Mohamady izay fantatry ny silamo ho mpaminanin' Andriamanitra, tany Arabia tamin' ny taonjato fahafito. Ny fampianarana fototry ny finoana silamo dia ny tawhid, izany hoe ny finoana an' Andriamanitra tokana izay tsy ahitana fanompoana hafa afa-tsy ny fanompoana an' Andriamanitra.
1 Ireo zava-dehibe indrindra ao amin' ny finoana silamo
1.1 Ny finoana an' Andriamanitra tokana
1.2 Ny boky masina Kor'any
1.3 Ny mpaminany Mohamady
1.4 Ny tanàna masin' i Maka
1.5 Ny litorjia ao amin' ny finoana silamo
1.6 Tetiandro miozolmana
2 Ny sampana lehiben' ny fivavahana silamo
2.1 Ny sonisma
2.2 Ny siisma
2.3 Ny karijisma
3 Ny andry dimin' ny finoana silamo
3.1 Ny fiekem-pinoana na Shahâda
3.2 Ny vavaka na Salat
3.3 Ny fiantrana ny tsy manana na Zakat
3.4 Ny fifadian-kanina na Sawm
3.5 Ny fivahiniana masina mankany Maka na Hadj
6 Rohy ivelany
6.1 Kor'any amin' ny teny farantsay (Wikisource):
6.2 Kor'any amin' ny teny anglisy (Wikisource):
6.3 Kor'any amin' ny teny malagasy
Ireo zava-dehibe indrindra ao amin' ny finoana silamo[hanova | hanova ny fango]
Ny finoana an' Andriamanitra tokana[hanova | hanova ny fango]
Mônôteista ny fivavahana silamo. Ny anaran' Andriamanitra dia Allah. Izany mahatokana an' Andriamanitra izany no atao amin'ny teny arabo hoe Tawhîd izay hamafisina amin'ny fiekem-pinoana (arabo: Shahâda) hoe: "Manambara aho fa tsy misy andriamanitra hafa afa-tsy i Allah ary i Mohamady no irak'Andriamanitra" (arabo: "اشهد ان لآ اِلَـهَ اِلا الله و أشهد ان محمدا رسول الله ").
Amin'ny Miozolmana dia i Allah no mpahary izao rehetra izao (na ‘âlam), ka maro ny teny amaritan' ny boky Kor'any ny toetrany, toy ny hoe "mahery", "mahay", "be indra fo", sns. Anarana miisa 99 no omen'ny fivavahana silamo an' ity Andriamanitra tokana ity, izay atao hoe "anaran' Andriamanitra tsara indrindra".
Tsy azo aseho an-tsary Andriamanitra satria tsy mifangaro fa ivelan' ny zavatra noforoniny sady avo indrindra.
Sady lavitra no akaiky, sady araka ny fomban' olombelona no tsy takatry ny sain' olombelona Andriamanitra, araka ny soratra ao amin'ny Kor'any, ka zava-miafina tanteraka izy, na "ghayb", ka tsy hay ampitahaina na amin' inona na amin' inona. Manana toetra fito fototra i Allah, dia ny fiainana, ny fahalalana, ny hery, ny sitrapo, ny fandrenesana, ny fahitana ary ny fitenenana.
Tsy lahy tsy vavy Andriamanitra. Mpahary sy mahefa ny zava-drehetra sy mahalala ny zava-drehetra ary mihoatra ny zavaboary noforoniny izy. Izy no tompon' izao rehetra izao sy ny hoavy, mpitsara amin' ny fitsarana farany, niseho tamin' ny mpaminany nifandimby hatramin' i Adama ka hatramin' i Mohamady. Ny soràta 112 (Al-Ikhlas) dia mamondrona ny fotopotony amin' ny fiheveran'ny Silamo an' Andriamanitra: "Izy no Allah tokana, Allah tsy takatry ny eritreritra, tsy miteraka Izy, tsy nateraka Izy, ary tsy mitovy na amin' inona na amin' inona Izy". Ny Kor'any dia manambara koa ny toetr' Andriamanitra izay mihoa-draha tanteraka nefa milaza koa io boky io fa akaiky ny olombelona (Kor'any, soràta 50.16) sy ny zavaboary noforoniny izay isehoan' ny asany sy anehoany izany asany izany Andriamanitra.
Ny boky masina Kor'any[hanova | hanova ny fango]
Ny Kor'any no boky masin’ ny Silamo. Ho an’ ireo mpino miozolmana dia teny ara-bakitenin’ ilay Andriamanitra tokana (Allah) ny Kor'any. Amin' ny teny arabo dia القُرْآن / al-Qur’ân no anaran' ilay boky. Ho an’ ny Miozolmana dia fanangonana ny tenin’ Andriamanitra izay fanambaràna (āyāt) nomeny ny mpaminany farany sady irak’ Andriamanitra, dia i Mohamady nanomboka tamin’ny taona 610-612 hatramin’ ny fotoana nahafatesany tamin’ ny taona 632 tamin’ ny alalan’ ny anjely Gabriela (جبريل /Jibrîl). Tamin' ny nanambaràna ny Soratra Masina, Andriamanitra dia niteny tamin' ny alalan' ny anjely Jibrily (Gabriela) sy ny mpaminany Mohamady izay nandre ny tenin' Andriamanitra fa tsy ny feony.
Ny mpaminany Mohamady[hanova | hanova ny fango]
Ny mpaminany Mohamady, araka ny sary tao amin'ny sora-tanana ôtômàna tamin'ny taonjato faha-17.
I Mohamady (amin'ny teny arabo محمّد / Muḥammad) no mpaminanin' Andriamanitra. Teraka tao Maka izy. Nanomboka ny asa faminaniany i Mohamady tamin’ny faha-40 taoany rehefa niseho taminy ny anjely Gabriela (Jibril amin’ ny teny arabo) nandritra ny fahitana, araka ny lovantsofina. Nambaran’i Mohamady tamin’ ny fianakaviany sy tamin’ ny namany akaiky ny antsipirian’ izany fanambaràna izany. Efapolo taona taorian’izay dia olona efapolo no voataonany hanaraka ny fivavahany. Tamin’ izany no nanombohany nitory teny imasom-bahoaka tao amin’ ny tanànan’ i Maka nahaterahany. Noho ny tsy fankasitrahan’ ny mponin’ i Maka azy dia niala tao izy tamin’ ny taona 622 ka nankany Iatriba (Yathrib), dia ilay tanàna atao hoe Madina ankehitriny. Izay fifindrà-monina izany no atao hoe Hijra, sady fiandohan’ ny ny fanisan-taona miozolmàna. Tao Iatriba (na Madina) i Mohamady dia tonga nanam-pahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana. Resiny ny ny Arabo sy Jiosy mpanohitra azy tao Madina, avy eo dia niady tamin’ ny tanànan’i Maka izy. Nitombo isa ny foko arabo nanaiky hofehezin' i Mohamady ary nilavo lefona i Maka tamin’ ny taona 630.
Ny hatsaram-panahy sy ny fahefan’ Andriamitra ny zava-drehetra ary ny maha tokana an’ Andriamanitra, ary koa ny tokony hananan’ny olona toetra malala-tanana sy marina amin’ ny fifandraisana amin’ ny samy olona no fampianarana lehibe nataon’ i Mohamady. Maro ireo lohahevitra avy amin’ ny jodaisma sy ny kristianisma izay tafiditra tao amin’ ny fivavahana naorin’ i Mohamady, na dia niorim-paka lalina tao amin’ ny kolontsaina arabo taloha aza izany fivavahana izany. Maro ireo fanao izay nalain’ ny mpaminany tamin’ ny mpanompo sampy izay noraisina amin’ ny endriny sy ny heviny hafa, ka isan’ izany ny fivahiniana masina, ny fankamasinana ny toerana misy ny Kaaba. Maty tamin’ ny taona 632 i Mohamady. Nahatsangana fanjakana arabo izay nitombo hery sy velarana haingana izy.
Ny tanàna masin' i Maka[hanova | hanova ny fango]
Ny Kaaba ao Maka
I Maka dia tanàna any amin' ny tapany andrefan'i Arabia Saodita, miorina 80 km miala ny Ranomasina Mena. Amin' ny teny arabo izy dia atao hoe مكة / Makka. Araka ny lovantsofina silamo dia tao no nahaterahan' ny mpaminany Mohamady tamin' ny faramparan'ny taonjato faha-6. Ao no misy ny môskea Masjid al-Haram ("Môskea Masina") izay misy ny Kaaba (arabo: الكعبة / al-Ka'ba).
Toeram-panaovana fivahiniana masina (arabo: حَجّ / hajj) ny ao Maka, ka indraimandeha isan-taona no fanaovana izany hatramin'ny taonjato faha-7. Manandrify an' i Maka koa no itodihan' ny mpino silamo rehefa manatanteraka ny vavaka atao isan' andro.
Ny litorjia ao amin' ny finoana silamo[hanova | hanova ny fango]
Miozolmana mivavaka amin'ny maraina ao amin'ny Moske Lehiben'i Nishapur any amin'ny tapany avaratra-atsinanan'i Iràna.
Ao amin' ny finoana silamo, ny teny hoe salāt (izay midika hoe "vavaka", avy amin' ny teny arabo hoe صلاة‎ / ṣalāh na صلوات / ṣalawāt raha milaza maro) dia fomba fivavahana arahim-pihetsika ara-batana tsy maintsy atao, ka mifanohitra amin' ny atao hoe dua (arabo: دُعَاء / duʿāʾ) izay midika hoe "fitalahoana". Ny maha zava-dehibe azy eo amin' ny Miozolmana dia ambaran' ny maha isan' ireo Andry dimin' ny finoana silamo azy.
Ialohavan' ny fidiovana (arabo: الوضوء / 'al-wuḍū) sady tanterahina indimy isan'andro izany. Averimberina ny andian-teny atao rakʿah (arabo: ركعة) na rakaʿāt (arabo:ركعات, raha milaza maro) raha anaovana asa (fihetsika) sy lahateny tsy maintsy tanterahina. Ny isan' ny rakaʿāt tsy maintsy atao dia mety ho roa hatramin 'ny efatra arakaraka ny fotoana ao amin' ny andro na ny toe-javatra hafa (toy ny fivavahana amin'ny andro Zoma izay anaovana rakaʿāt roa).
Tsy maintsy ataon' ny Miozolmana rehetra ny vavaka, afa-tsy ireo izay mbola tsy niala sakana sy ireo vehivavy tonga fotoana na tera-bao.
Tetiandro miozolmana[hanova | hanova ny fango]
Ao amin'ny tetiandro miozolmana, ny iray volana, izay mitovy amin' ny fitsingerenan' ny Volana amin' ny Tany, dia misy 29 na 30 andro ary ny iray taona misy 354 na 355 andro. Ny fanombohan' ny volana tsirairay dia mifanandrify amin' ny fotoan' ny tsinam-bolana hitan' ny maso. Ny taona 1 amin' ny tetiandro miozolmana dia mifanandrify amin' ny taona 622 taor. J.K. amin' ny tetiandro gregoriana ary ny andro voalohany dia mifanandrify amin' ny 15 na 16 Jolay tamin' io taona 622 io. Atao hoe التقويم الهجري‎ / at-taqwīm al-hijrī io tetiandro io amin' ny teny arabo. Andro voalohany amin' ny volana Muharram izany. Io no andro voalohany tamin' ny fifindrà-monin'ny mpaminany Mohamady sy ireo mpanaraka azy avy ao Maka hankany Iatriba (tanàna fantatra amin' ny anarana hoe Madîna amin' izao fotoana izao). Izany fifindrà-monina izany no atao hoe Hiǧrah (هجرة) amin' ny teny arabo.
Ireto avy ny anaram-bolana ao amin' ny tetiandro miozolmana:
Rabi' al Awal (ربيع الأوّل)
Rabi' ath-Thani (ربيع الثاني)
Jumada al Awwal (جُمَادَىٰ الْأَوَّل) na Jumadaal‘Ula (جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ)
Jumada ath-Thania (جمادى الثاني) na Jumaada al-Akhir na Jumada al-Akhira (جمادى الآخر)
Dhu al Qidah na Dhu'l-Qa'dah (ذو القعدة)
Dhu al-Hijja (ذو الحجة).
Ny Ramadany dia volana fahasivy ao amin' ny tetiandro miozolmana. Io ihany ny anaram-bolana hita ao amin' ny boky Kor'any. Ho an' ny mpino silamo dia io no volana tsara indrindra. Volan' ny falala-tanana ny Ramadany, satria rehefa mifarana izy dia mizara ho an' ny mahantra ny mpino, izany no atao hoe zakât al-fitr. Volana ahatsiarovana zava-niseho maro teo amin' ny tantaran' ny finoana silamo koa ny Ramadany.
Ny sampana lehiben' ny fivavahana silamo[hanova | hanova ny fango]
Mizara sampana telo lehibe ny fivavahana silamo, dia ny sonisma sy ny siisma ary ny karijisma.
Ny sonisma[hanova | hanova ny fango]
Ny sonisma no sampana lehibe indrindra ao amin' ny finoana silamo izay ahitana ny 80 %n' ny mpino silamo maneran-tany. Iray amin' ny sampana telo lehiben' ny finoana silamo ny sonisma. Miavaka amin' ireo sampana hafa ireo ny sonisma noho ny fomba fiheverany ny fivavahana. Matetika dia lazaina ho "Miozolmana ôrtôdôksa" ny Sonita.
Ny siisma[hanova | hanova ny fango]
Ny siisma dia sampan' ny finoana silamo manaiky fa i Ali sy ny taranany no mpandimby an' i Mohamady. Ny Siita dia eo anelanelan'ny 10 % sy 15 %n' ny vahoaka miozolmana maneran-tany, ka ny ankamaroany dia monina ao Iràna sy Iràka ary Bareina. Siita dia manana mpitondra fivavahana ahitana ambaratongam-pitondrana.
Ny karijisma[hanova | hanova ny fango]
Ny karijisma dia sampan' ny finoana silamo izay teraka tamin' ny fanelanelanana natao tamin' i Ali sy i Mu'awiya raha avy niady tao Siffin izy ireo tamin' ny taona 657. Atao hoe Karijita ny mpino silamo ao aminy.
Ny andry dimin' ny finoana silamo[hanova | hanova ny fango]
Ny andry dimin’ ny finoana silamo dia adidy miisa dimy izay tsy maintsy tanterahin’ ny mpino silamo. Atao hoe arkān izany amin’ ny teny arabo. Ireto avy izy ireo: 1. manonona ny fiekem-pinoana na (shahada); 2. manatanteraka ireo vavaka dimy fanao isan’ andro (salat) izay ialohavan’ ny fidiovana manaraka fombafomba; 3. mifady hanina amin’ ny volana Ramadany (sawm); 4. manefa ny asa fiantrana (zakat); 5. manatanteraka fivahiniana masina (hadj) any amin’ ny tanàna masin’ i Maka amin’ny fotoana maha afaka ara-batana sy ara-bola ny mpino.
Ny fiekem-pinoana na Shahâda[hanova | hanova ny fango]
Ny andry voalohan’ ny finoana silamo dia ny fiekem-pinoana izay atao hoe Shahâda (teny arabo: ٱلشَّهَادَة / aš-šahāda).
Izao ny endriky ny Shahada ao amin'ny sonisma:
“ʾašhadu ʾan lâ ʾillâha ʾillâ -llâh, wa-ʾašhadu ʾanna Muḥammadan rasûlu-llâh”
Izany fiekem-pinoana izany, izay ambara rehefa miova ho amin’ ny fioana silamo ny tena na tononina farany eo am-pialana aina, dia tokony ataon’ ny Miozolmàna rehetra ampahibemaso fara-fahavitsiny indray madeha ao amin’ ny androm-pianany. Tononina eo an-tsofin'ny zaza vao teraka koa ny Shahâda ary ny olona efa ho faty dia tokony hanonona azy alohan' ny hialany aina. Isan' ny atao hoe Adhân (arabo: أَذَان "antso") izay ataon' ny Mu'adhdhin (arabo: مؤذّن "mpiantso") izy, dia ilay fiantsoana ny mpino atao eny amin' ny mi'dhana ("tilikambo fiantsoana") mba ho tonga hivavaka.
Ny vavaka na Salat[hanova | hanova ny fango]
Ny vavaka na Salat (teny arabo: صلاة / ṣalawāt) no andry faharoa ao amin’ ny finoana silamo. Isan’andro dia tokony manatanteraka ireo vavaka dimy tsy maintsy atao ny mpino. Tsy atao anefa izy ireo raha tsy efa vita ny fombafomba fidiovana. Ireto ny fotoana anatanterahana ireo vavaka ireo:
alohan’ ny hiposahan’ ny masoandro (صلاة الفجر / ṣalāt al-faǧr "vavaka alina");
amin’ ny mitataovovonana (صَلَاة ٱلظُّهْر / Ṣalāt aẓ-Ẓuhr; "vavaka antoandro");
eo antenanten’ ny tolakandro (صلاة العصر / ṣalāt al-ʿaṣr, "vavaka tolakandro);
vantany vao milentika ny masoandro (صلاة المغرب / ṣalāt al-maġrib "vavaka amin' ny filentehan' ny masoandro");
alohan’ ny misasakalina (Aصلاة العشاء / ṣalāt al-ʿišāʾ"vavaka amin' ny alina").
Mitodina mankany amin’ ny Kaaba sy miondrika ary mandohalika araka ny fombafomba voafaritra mazava tsara rehefa manatanteraka ireo vavaka ireo.
Ny fiantrana ny tsy manana na Zakat[hanova | hanova ny fango]
Andry fahatelo ny fiantrana ny tsy manana, izay atao hoe Zakat (arabo: زَكَاة / Zakāt, midika hoe “fanadiovana”) izay ahafahana manadio ny harena azon’ ny mpino. Izany fiantrana izany dia azo alaina amin’ ny vokatry ny fambolena na ny fiompiana na ny vato saro-bidy na ny vola, nefa ireo izay manana harena mihoatra ny ampy tokony hahafahany mivelona soa aman-tsara no manatanteraka izany.
Ny fifadian-kanina na Sawm[hanova | hanova ny fango]
Andry fahefatra ao amin’ ny finoana silamo dia ny fifadian-kanina, izay atao amin' ny teny arabo hoe صَوم / ṣawm. Mandritra ny volana Ramadany no tsy maintsy anaovana izany ka ireo Miozolmana olon-dehibe sy salama tsara no didiana hanao azy. Manomboka amin’ ny mangiran-dratsy ka hatramin’ ny filentehan’ ny masoandro dia tsy azon’ ny mpifady hanina atao ny manendry zavapisotro sy ny mihinana sakafo ary ny manao firaisana amin' ny vady. Ny marary sy ny vehivavy mampinono dia tsy terena hifady hanina.
Ny fivahiniana masina mankany Maka na Hadj[hanova | hanova ny fango]
Mpivahiny madeha manodidina ny Kaaba
Andry fahadimy ao amin’ ny finoana silamo ny fivahiniana masina, izay atao amin' ny teny arabo hoe حَجّ / Hadj. Ny Hadj no manan-danja indrindra amin’ ireo fivahiniana masina roa mankany Maka. Ny Miozolmana salama tsara rehetra dia tokony hanao fivahiniana masina indray mandeha amin’ ny fotoana ahavelomany raha ampy ny hoenti-manana ara-bola hiatrehana izany. Amin’ ny volana fahafolo no manomboka ireo lanonana izay andehanana impito manodidina ny Kaaba sy impito eo anelanelan’ ny tendrombohitra Safa sy ny tendrombohitra Marwa. Eo anelanelan’ ny andro faha-9 sy faha-12 amin’ ny volana faha-12 (volana dhul al-Hijja), ny lanonana ivorian’ ny mpanao fivahinina masina rehetra, ao amin’ ny lohasaha manatrika ny tendrombohitra Mina, tsy lavitra an’ i Maka, izay anaovana sorona.
Tenim-pinoana[hanova | hanova ny fango]
Ny finoana miozolmana dia tenim-pinoana (dôgma) silamo dia ireo petra-kevitra tsy azo ovana momba ny finoana. Misy enina izy ireo, dia ireto avyː
Mino ny fisiana sy ny maha tokana an' Andriamanitra;
Mino ny fisian' ny anjely (ملاًئِكة / malā'ikah);
Mino ny fisian'ny mpaminanyː i Mohamady no farany amin'izy ireo, i Jesoa (عيسى ابن مريم /ʿĪsā ibn Maryam) no alohan'ny farany, i Mosesy (موسى / Mûsâ) sy i Davida (دَاوُوْد‎ / Dāwūd) sy i Sôlômôna (سُليمان‎ / Sulaymân) sy i Abrahama ( إبراهيم / Ibrahim) sy i Noa (نوح / Nûh) ary ny maro hafa dia nirahin' Andriamanitra talohan' izy ireo ho an' ny vahoakany.
Mino ny fisian'ny boky nalefan' Andriamanitra ety an-tany, izay nataon' Andramanitra, ka ny Kor'any no farany (nambara tamin' i Mohamady, ny Evanjely (إنجيل / ʾInjīl) no talohan' ny farany (nambara tamin' i Jesoa), ny Torah (توراة‎) / Tawrat) (nambara tamin' i Mosesy), ary ny Salamo (الزَّبُورُ‎ / Zabūr) nambara tamin' i Davida.
Mino ny fisian' ny Andron 'ny fitsarana faranyː amin' izany andro izany dia hizara vondrona roa ny olombelonaː ny an' ny Paradisa sy ny an' ny Afobe. Ireo vondrona roa ireo dia hisy zana-bondrona.
Mino ny fisian' ny lahatra, izay mety ho ny tsara na ny ratsy.
Fivavahana tao Arabia talohan' ny fivavahana silamo
Finoana abrahamika: Jodaisma - Kristianisma - Bahaisma - Mônôteisma - Fanekem-pinoana
Tontolo miozolmàna: Mohamady - Kor'any - Tetiandro miozolmana - Hijra - Finoana silamo eto Madagasikara
Sampanan'ny finoana silamo: Shiisma - Sonisma - Karijisma
Kor'any amin' ny teny farantsay (Wikisource):[hanova | hanova ny fango]
Le Koran: Traduction d’Albin de Kazimirski Biberstein (1952)
Le Coran: Traduction d’un choix de sourates par Édouard Montet (1925)
Le Coran: Traduction de Claude-Étienne Savary (1783)
Kor'any amin' ny teny anglisy (Wikisource):[hanova | hanova ny fango]
The Qur'an (2015), translated by the Progressive Muslims Organization (with Arabic)
The Holy Qur-án (1917, rev. 1920), translated by Maulana Muhammad Ali (transcription project)
Kor'any amin' ny teny malagasy[hanova | hanova ny fango]
Full text of "Holy-Quran-Malagasy - اللغة المدغشقرية الملغاشية في مدغشقر"
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Silamo&oldid=1037530"
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2021 amin'ny 15:55 ity pejy ity.